Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Toerana an-drenivohitra eran-tany tsara indrindra ho an'ireo mpizahatany any Etazonia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahrain • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana India • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao Mafana Koety • Vaovao Mafana Malta • Oman Vaovao Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Vaovao farany UAE
Toerana an-drenivohitra eran-tany tsara indrindra ho an'ireo mpizahatany any Etazonia.
Mba hamaritana hoe iza amin'ireo renivohitra no tsara indrindra hotsidihina amin'ny fialan-tsasatra, dia nandinika renivohitra 69 novolavolaina ireo manam-pahaizana momba ny fitsangatsanganana tamin'ny lafin-javatra maro isan-karazany, anisan'izany ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaterana, ny salan'isa toetr'andro ary ny isan'ny toerana mahasarika sy trano fisakafoanana.
Ankara, Torkia no renivohitra tsara indrindra amin'ny vidin'ny hotely, miaraka amin'ny sarany $45.74 isan'alina.
Manana fitateram-bahoaka maimaim-poana i Luxembourg ary renivohitra tsara indrindra amin'ny fitaterana eran-tany.
Valletta, Malta no renivohitra tsara indrindra ho an'ny fialamboly (311 isaky ny KM isaky ny metatra toradroa) ary ho an'ny trano fisakafoanana (442.6 KM isaky ny sq).
Rehefa manakaiky ny ririnina, ny tanàna no toerana tsara indrindra handehanana fialan-tsasatra, feno zavatra maro hanaovana na inona na inona toetr'andro.
Ary ho an'ny mpandeha izay manantena ny handositra ny USA ankehitriny, rehefa nesorina ny famerana ny dia, ny tanàn-dehibe manerana izao tontolo izao dia manome ny toerana fialan-tsasatra tsara indrindra.
Inona anefa no renivohitra tsara indrindra ho an'ny mpizaha tany?
Mba hamaritana hoe iza no renivohitra tsara indrindra hotsidihina amin'ny fialan-tsasatra, dia nandinika renivohitra 69 novolavolaina ireo manam-pahaizana momba ny fitsangatsanganana tamin'ny lafin-javatra maro isan-karazany, anisan'izany ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaterana, ny salan'isa toetr'andro ary ny isan'ny toerana mahasarika sy trano fisakafoanana.
Ny tanàn-dehibe 10 tsara indrindra ho an'ny mpizaha tany manerana izao tontolo izao
laharana Renivohitra Firenena Salanisan'ny trano fandraisam-bahiny ($) Vidin'ny tapakila antsalany salan'isa Fitateram-bahoaka eo an-toerana ($) Temp antonony (degre c) Salan'ny orana isan-taona (mm) Isan'ny zavatra manintona Isan'ny trano fisakafoanana Total Score
2 Abu Dhabi Emirà Arabo Mitambatra $158.69 $0.55 27.92 42 591 2,778 6.24
5 Riyadh Arabia Saodita $169.78 $0.87 26.00 66 218 1,289 5.74
7 Paris Frantsa $193.34 $2.26 12.30 720 7,797 17,448 5.57
8 Koety Koety $180.87 $0.85 25.70 128 423 1,144 5.56
9 Ankara vorontsiloza $45.74 $0.42 12.00 451 532 3,888 5.53
10 Jakarta Indonezia $81.77 $0.28 26.70 2,097 793 8,958 5.48
Valetta, Malta dia nambara ho renivohitra tsara indrindra eran-tany miaraka amin'ny isa ankapobeny 6.74 amin'ny 10, miaraka amin'ny isan'ny mahasarika sy trano fisakafoanana ambony indrindra amin'ireo tanàn-dehibe rehetra.
Abu Dhabi, renivohitr'i Emirà Arabo Mitambatra, no laharana faharoa tamin'ny naoty 6.24 amin'ny 10. Nahatratra 27.92 degre ny maripana antonony tao an-tanàna ary 42mm isan-taona monja ny rotsak'orana salan'isa, ka mahatonga azy io ho toerana tsara indrindra raha mpikatsaka masoandro ianao.
New Delhi, India dia manana ny laharana fahatelo amin'ny salan'isa 6.06 amin'ny 10, miaraka amin'ny salan'isa ambony indrindra amin'ny 25 degre ary trano fisakafoanana 12,409 azo isafidianana.
Bangkok, Thailand no renivohitra tsara indrindra amin'ny mari-pana amin'ny 26.6 degre eo ho eo.
Kairo, Ejipta dia manana rotsak'orana faran'izay kely indrindra ary 18mm monja ny rotsak'orana isan-taona.